Malunga nathi - GTMSMART Machinery Co., Ltd.
GTMSMART Oomatshini Co., Ltd. lishishini eliphezulu-lobuchwephesha elidibanisa i-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo. Iimveliso zethu eziphambili ziquka oomatshini Thermoforming, Umatshini wePlastiki we-Thermoforming kwaye Indebe ye-Thermoforming Machine,Umshini Industrial Umatshini bokwakha, Umatshini wokwenza ikomityi yephepha, Iphepha lesitya sokwenza umatshini, Iphepha leplate elenza umatshini njl.
Siphumeza ngokupheleleyo inkqubo yolawulo ISO9001 kwaye ngokungqongqo esweni yonke inkqubo yemveliso. Bonke abasebenzi kufuneka bafumane uqeqesho lobungcali ngaphambi kokuphangela. Yonke inkqubo yokulungisa kunye neyokuhlanganisa inemigangatho engqongqo yobugcisa yesayensi. Iqela eligqwesileyo lokuvelisa kunye nenkqubo epheleleyo yomgangatho iqinisekisa ukuchaneka kokulungiswa kunye nokuhlanganiswa, kunye nokuzinza nokuthembeka kwemveliso.
I-GTM ineqela lobuchwephesha lobuchwephesha elinikezelwe kuphando, uphuhliso, kunye nokuveliswa kokusebenza okuphezulu, ukonga umbane kunye nezixhobo zeplastiki ezizenzekelayo kakhulu kunye nezixhobo ezinxulumene nokubumba. Unokubonelela abathengi ngeenkonzo ezipheleleyo nezicingisisiweyo: kubandakanya umatshini kunye nokuyila ukungunda kunye nokuvelisa, ukufakela kunye nokugunyazisa, uqeqesho lwabasebenzi, njl.
Sisekwe kumoya wokufuna inyaniso kwiinyani kunye nesimo sengqondo sokufuna ukugqwesa, sinikele ingqalelo kwinkqubela phambili yokupakisha koomatshini beplastikhi, ukudibanisa itekhnoloji yokuvelisa ephambili yoomatshini bokupakisha beplastiki ekhaya nakumazwe aphesheya kunye neemfuno zabathengi, kwaye sizame ukubonelela abathengi bethu ngomgangatho ophezulu wokupakisha oomatshini beplastiki kunye neemveliso zezixhobo; Esona sisombululo sisiso kunye nentengiso yangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, inkonzo yasemva kokuthengisa kunye nenkxaso.
Abathengi bethu （Iimveliso kwindawo zabathengi）